Trump oo Booqday Xadka Mexico Ee Uu Doonayo Inuu Gidaar Ka Dhiso | WAJAALE NEWS
Hargeysa (WJN)- Madaxweyne Donald Trump ayaa markale ku goodiyay inuu ku dhawaaqayo xaalad degdeg ah oo qaran si lacag loogu helo dhismaha gidaarka xadka Mareykan iyo Mexico xilli koongareesku ku gacan saydhay inay ansixiyaan kharashki lagu dhisi laha.
Waxa uu sidoo kale madaxweyne Trump sheegay in dowladda Mexico ay “si dadbadan” u bixineyso kharashka dhismaha gidaarka.
Laamaha dowladda Mareykanka ayaa qeyb ahaan ay xidhnaayeen 20 kii maalmood ee lasoo dhaafay, taasi oo sababtay in ku dhawaad 800 oo kun shaqaalaha federaalka ah ay mushaar la’aan ku dhacdo.
Madaxweyne Trump ayaa diidan inuu saxeexo sharci lagu maalgelinayo dibna loogu furayo howlaha laamaha dowladda haddii aysan ka mid ahayn 5.7 bilyan oo doolar oo lagu dhisayo gidaarka xadka Mexico iyo Mareykanka.
Balse wadahadalo lagu arrinsanayay kharashka dhismaha gidaarka ayaa socon waayay xilli xubnaha dimoqaraadiyiinta ay ku gacan saydheen inay ogolaadaan kharashkaasi.
Mr Trump ayaa kulankaas ku tilmaamay in uu ahaa wakhti lumis.
Mr Trump ayaa ku hanjabay in uu ku dhawaaqi doono xaalad degdeg ah oo qaran haddii ay sii socoto xiisadda la xidhiidha darbiga, isagoo garab mari doono ansaxinta Koongareeska ee dhisidda gidaarka.
Ismari waagaan ayaa dhaliyey in ay xidhnaadaan laamo kamid ah xukuumadda tan iyo 22 December.